Indoor Space Acoustic Panels ကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ - သတင်း - Suzhou Soundbetter Architectural Materials Co., Ltd.
Indoor Space Acoustic Panels ကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ
မိုးလုံလေလုံ နေရာ24mm Polyester Acoustic Panelခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံ
1. ဘောင်။ ပံ့ပိုးမှုအနေဖြင့် သစ်သားဘားများ၊ အလူမီနီယမ်အလွိုင်းပရိုဖိုင်များ သို့မဟုတ် နံရံထူသောစတီးလ်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
2. အလုံးစုံ မျက်နှာပြင်အလွှာကို ကာကွယ်ပါ။ အများအားဖြင့်၊ porosity သည် 20%, အထူ 20% ထက်ပိုသည် သို့မဟုတ် ပါးလွှာသော tinplate, aluminium platinum သို့မဟုတ် plastic sheet သည် အက်ကွဲသွားပါသည်။ အပေါက်အချင်းသည် 4-8 မီလီမီတာဖြစ်သည်။
3. အသံစုပ်ယူနိုင်သော အားဖြည့်ကိရိယာ။ ဖန်ဖိုက်ဘာကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊ ဖန်ဖိုက်ဘာအ၀တ်အထည်များနှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ပြီး ဖိသိပ်မှုအားကောင်းသည့် အခြားပစ္စည်းများကို မျက်နှာဖုံးအလွှာအဖြစ် အသုံးပြုပါသည်။ စိုစွတ်ပြီး အေးသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ တစ်ဖက်သတ် သို့မဟုတ် နှစ်လွှာဖောက်ထားသော အလူမီနီယမ်ပြားကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။24mm Polyester Acoustic Panelporous structure အစား အလွှာ။
4. ဝက်အူ။ သံထည်ပစ္စည်းများ၊ ချိတ်များ၊ ကျောက်ဆူးများ စသည်တို့ကို အသုံးချသည့်အခါ၊ မျက်နှာပြင်အလွှာတစ်ခုစီကို ကုန်ကြမ်းများ၏ အသံစုပ်ယူမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို အပြည့်အဝအသုံးပြုရန် အကျိုးကျေးဇူးရှိသော အသံလွင်ပြင်တွင် မျက်နှာပြင်အလွှာတစ်ခုစီကို ချထားပါသည်။
(၁) မော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များ၊ မော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကို စစ်ဆေးပါ။24mm Polyester Acoustic Panelပြားများ။
(၂) အသံစုပ်ယူခြင်းဘုတ်ပြားအား တပ်ဆင်ရန်အတွက် ဆိုက်တွင် နှစ်ရက်ကြာ တပ်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ သို့မှသာ အသံစုပ်ယူနိုင်သော ဘုတ်အား အခန်းနှင့် ပင်မ keel ဖြစ်အောင် ပေါင်းစပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
(၁) တံတိုင်းဖြင့် ဖုံးထားသည်။24mm Polyester Acoustic Panelဘုတ်ပြားကို ဒီဇိုင်းပုံများ သို့မဟုတ် ဆောက်လုပ်ရေးပုံများအတိုင်း ပင်မ keel ဖြင့် တပ်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ပင်မ keel ကို ပြုပြင်ပြီး ဖြေရှင်းသင့်ပါသည်။ ပင်မ keel ၏မျက်နှာပြင်သည် သံချေးတက်ခြင်းနှင့် ပုံပျက်ခြင်းကင်းစင်ပြီး ချောမွေ့နေရပါမည်။
(၂) ဗိသုကာ ဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တည်ဆောက်ခြင်းမပြုမီ တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ နံရံကို ဖြေရှင်းသင့်သည်။ ပင်မ keel ၏ အစီအစဉ်သည် အသံစုပ်ယူနိုင်သော panel များ၏ အစီအစဉ်နှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။ သစ်သား keel မျက်နှာကျက်များကြားကာလသည် 300mm ထက်နည်းသင့်ပြီး light steel keel partitions များကြားကာလသည် 300mm ထက်မပိုသင့်ပါ။ 400mm ပင်မ keel တပ်ဆင်ခြင်းသည် အရှည်နှင့် အတိုအထိ ဒေါင်လိုက်ဖြစ်သင့်သည်။24mm Polyester Acoustic Panelဘုတ်အဖွဲ့။
(၃) သစ်သားကလီမျက်နှာကျက်နှင့် ကျေးလက်နေ အခြေခံလူတန်းစားများ၏ မျက်နှာပြင်အလွှာကြား အကွာအဝေးသည် အမှန်တကယ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဖြစ်ရမည်။
လွန်ခဲ့သော:Acoustic Panels များကို သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။
နောက်တစ်ခု:3D Acoustic Wall တပ်ဆင်ခြင်း။